३० हजार भुइँकटहर नबिकेर बोटमै कुहिने अवस्थामा
चैत २४, भद्रपुर । लकडाउनको असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । झापाको भद्रपुर-९ घोडामारामा सञ्चालित कोइरी कृषि तथा पशुपक्षी फार्ममा फलेका ३० हजार भुइँकटहर यतिबेला पाकेर पहेँलपुर भएका छन् तर बजार ठप्प हुँदा बोटमै खेर जाने अवस्था आएको छ ।
‘बोटमा फल पाकेर पहेँलै भइसके, सारा बजार बन्द छ अब कहाँ लगेर बेच्नु ?’, फार्मका सञ्चालक मनोज सिंहले चिन्तित हुँदै भने ।
विगत चार वर्षदेखि पाँच बिघा जग्गामा सिंहले भुइँकटहरको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । फार्ममा उत्पादित भुइँकटहर यसअघि काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा लगेर विक्री गरिँदै आएको थियो ।
अहिले लकडाउनका कारण कालीमाटी बजार बन्द हुनु र अन्यत्रसमेत विक्री नभएपछि ठूलो लगानीमा गरिएको उत्पादन कुहिएर बोटमै खेर जाने अवस्था आएको सञ्चालक सिंहले बताए ।
हाल उनको खेतीमा ८० हजार बोटमा फल लागेको छ भने ३० हजार फल पाकिसकेका छन् । बाँकी ५० हजार बोटमा जेठमा पाक्ने गरी चिचिला हुर्किरहेका छन् । चैत वैशाखमा रसिलो र गुलियो भुइँकटहरले बजारमा राम्रो भाउ पाउने गरेको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि गरिएको लकडाउनले बजार ठप्प भएका छन् ।
सिंहले भुइँकटहर खेतीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रू. १८ लाख र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट रू. पाँच लाख कर्जा लिएको बताउछन् । ‘उत्पादन बजारमा विक्री गर्ने ‘पिक सिजन’मा लकडाउनले चौपट गर्‍यो, यसपाली भुइँकटहर खेतीमा रू. २२ लाख जति घाटा होला जस्तो छ’, उनी बताउँछन् ।
यस वर्षको चैत वैशाखमा भुइँकटहर प्रतिगोटा स्थानीय बजारमा रू. ५० देखि रू. ६० सम्म र काठमाडौंमा रू. ७० सम्ममा विक्री हुने उनको अपेक्षा थियो । तर अहिले फार्ममा आउने जोकोहीलाई उनले ठूलो घाटा सहेर प्रति गोटा रू. २५ मै विक्री गरिरहेको जानकारी दिए । फार्ममै आएर फाट्टफुट्ट किन्ने थोरै रहेका छन् ।
लकडाउनले पुर्‍याएको क्षतिबारेमा गुनासो सुनाउने र मर्म बुझिदिने कुनै निकाय नपाएको उनको गुनासो छ । ‘भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठलाई समस्या सुनाएको थिएँ’, फार्म सञ्चालक सिंहले भने, ‘उहाँले काठमाडौं लैजाने भए गाडीको पास बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि हाल झापामा दर्जनौँ स्थानमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएका छन् । राहत सामग्रीको रूपमा चामल र दाल वितरण कार्य भइरहेको छ ।
फार्म सञ्चालक सिंहले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुका लागि र राहत बाँड्नका लागि भुइँकटहर किनिदिने व्यवस्था हुने हो भने आफूले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा राखेका छन् । भुइँकटहर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने फल भएको हुँदा यसको सेवन स्वास्थ्यवर्धक हुने उनले बताए । रासस
प्रदेश नं १ मा ९३ प्रतिशत धान रोपाइँ[२०७७ सावन, २३]
खानेपानी संस्थानका प्रमुखलाई पक्राउ पूर्जी[२०७७ सावन, २३]